Ilizwi livakala Magnetic iMifanekiso Technologists Job Inkcazelo / Duty Sample And Functions – JobDescriptionSample
Home / Ilizwi livakala Magnetic iMifanekiso Technologists Job Inkcazelo / Duty Sample And Functions
Usebenza livakala Imaging (MRI) imifanekiso. Gada ukhuseleko nomonde nentuthuzelo . Ngaba unikele gadolinium umahluko balawule butofelwe. On yokuhlalutywa ukuma iindlela MRI na, wachaza ukuze udliwano umntu, nendawo isiguli. Ngamana ufake iinkcukacha computer ezifana zelifa isiguli, ulungelelwaniso elikhankanyiweyo, ummandla eziphilayo ukuze ndibe ziskenwe, kunye nendawo ukungena.
Imise Tracking komzimba kukhokelela suffereris ngesandla, umzimba osisibhuku-bhuku ongenazinyawo nangalo, besinqe, okanye amanye amalungu omzimba.
Lungisa umazibuthe liyenza umfanekiso (MRI) unit okanye hardware peripheral.
Ukuqhutywa ukuhlolwa ndlebe abantu ukuba ukuchonga Izimo, umzekelo ayoni izinto valve izinto pacemakers ezase .
Khupha iikopi zokuncedisa iifoto kokufuduswa nemizobo iikhompyutha yokusebenzela okanye osusekayo.
Yakha okanye wenze data umfanekiso Iifoto ekuvakaleni kwelizwi magnetic.
Chaza umazibuthe liyenza umfanekiso (MRI) iindlela abantu, abasasazi bona bengabantu, okanye amalungu endlu.
Faka yegazi Umehluko imibala, ezifana umzekelo gadolinium umahluko, kukubekwa of practice ngokuhambisana.
Khangela photos malunga elihle, kusetyenziswa ikhamera kunye nezixhobo magnetic ukhuseleko ekuvakaleni kwelizwi.
Yenza Magnetic livakala zokuPrinta nokwenza (MRI) yabavavanyi.
uma oyifunayo, ukuqinisekisa iiyunithi kwindawo immobilization efanelekileyo ukuba, iqiniswe indawo abanale lumiswe.
earplugs Supply okanye iiseti zentloko abantu sandise bakhululeke kwaye izandi aphantsi Kubuhlungu.
Khetha izangqa okanye ukwenza imifanekiso eziyimfuneko ubuchule obufanelekileyo umfanekiso.
Ukuxazulula izinto ezintsonkothileyo ezinxulumene magnetic ekuvakaleni kwelizwi umfanekiso (MRI) umfundi okanye neuropathy iimveliso, kuquka iiwotshi okanye izangqa.
Uluhlu ukuba ukuziphatha ukuba nakuqwalasela ukugcina up stock lwezixhobo ukuba unyango.
Cebisa iqela lwempilo okanye abafundi magnetic ekuvakaleni kwelizwi umfanekiso (MRI) iinkqubo okanye inkqubo izixhobo.
Ukusebenza iindlela nabizayo ukuba baphinde babe umazibuthe enamandla ekuvakaleni kwelizwi umfanekiso (MRI) iifoto, umzekelo practical ubuchopho-imaging, -Time real umzimba motion yokulanda umkhondo, okanye ukwakhiwa musculoskeletal kunye flight nokuthelekelela.
nadlamkisayo imfuno okanye iziyobisi eyongezelelweyo koogqirha ngabantu isidumo okanye bephelelwa.
Qwalasela iingxelo amafutshane ukuba yezonyango evela kwizigulane.
Khangela umazibuthe liyenza umfanekiso (MRI) izixhobo ukwenza yokusebenza ezithile ezifanelekileyo kunye nokusebenza ngokungqinelana neemfuno.
Yenza izaziso ukushwankathela iinkqubo nokuhlola okanye iziphumo malunga oogqirha okanye iingcali zonyango ezahlukeneyo okanye iingxelo.
Ukunxulumanisa nesandla zebhayoloji begazi ukuthenga yokubamba (PAC) iimveliso.
Indawo ezikhuselweyo kancinane, ezishenxisekayo magnetic liyenza umfanekiso (MRI) abafundi umzimba inxalenye ukuba imaged, ezifana ingalo, idolo, okanye uye.
Iintlanganiso Plan malunga nemiba uphando okanye abathengi ukuba clinical.
Isicatshulwa-Ukuqonda yabhalwa nemihlathi kunye izivakalisi amaphepha ezinxulumene nomsebenzi.
Ukuphulaphula-To Active into abanye abantu bathi ukunika ingqalelo yonke, ukuthatha ixesha ukuqaphela izinto kokuba eyenziweyo, imibuzo imibuzo ngendlela efanelekileyo, kwaye bhe kwi izihlandlo ukuba ezingafanelekanga.
Ukushicilela-Ukunxibelelana ngendlela eyiyo ebhaliweyo njengoko ezingafanelekanga ukuba iimfuno zemalike.
Uxoxa-Ukuthetha nabanye ukukhankanya ulwazi ngempumelelo.
Math-Ukusebenzisa izibalo ukulungisa imiba.
iindlela Science-Ukusetyenziswa kunye nemimiselo zobugcisa ukulungisa iingxaki.
Criticalthinking-Ukusebenzisa logic babecinga ukuba ubone iinzuzo kunye neziphene ongakhetha enye, iziphumo okanye iindlela kwimiba.
Learning-Ukuqonda Active ukubaluleka kolwazi entsha zombini elizayo kunye nomnikelo kwezigqibo zokusombulula iingxaki kwaye.
Ukufunda Strategies-icholwa kwaye usebenzisa izicwangciso educationORtutorial kunye neenkqubo ezazibonisa ingxaki ukufundisa okanye xa befunda izinto ezintsha.
yokusebenza-OverseeingPERDiscovering Monitoring-arhente, abantu ezongezelelweyo, okanye nakuye cinga amanyathelo okulungisa okanye ukudala zikude.
Social Perceptiveness-Ukwazi iimpendulo othersA yaye esazi ukuba kutheni ukuziphatha ngokuba benze.
Ukweyisela-Ndeyisela abanye ukutshintsha imikhwa okanye nongqondongqondo zabo.
Iingxoxo-Ukuthatha abanye kunye nokuzama axolelanise mahluko.
Sokuyalela-befundisa abanye HOWTO athathe amanyathelo.
Orientation-Bamfuna Company izama ukufumana ubuchule ukuze sincede abantu.
Complex ukusombulula iingxaki-Ukuchonga iingxaki ezintsonkothileyo kunye nokuhlaziya iinkcukacha ezifanelekileyo ukuphumeza iinketho nokuvelisa nokuvavanya ukhetho.
iimfuno ngemveliso amashishini Uphando-Ukufundisisa ukwenza isimbo.
Engineering izixhobo okanye ukuvelisa neteknoloji ukunceda umsebenzisi ufuna Design-Ukuba.
Izixhobo izixhobo Ukhetho-Ukumisela uhlobo izixhobo kwafuneka ukuba lenze umsebenzi.
izicelo Izavenge-Kufakwa, imishini, ezintambo, okanye izixhobo ukwanelisa iimfuno.
iinkqubo computer Programming-Ukubhala kwizicelo ezahlukeneyo.
Umsebenzi iminxeba umkhondo-lomkhosi, into yokulinganisa, okanye ebonisa ezahlukeneyo ukuze aqinisekise izixhobo enza ngempumelelo.
Imisebenzi kunye neenkqubo Ulawulo-oPhetheyo of iindlela okanye izixhobo.
Ulondolozo-Kusetyenziswa ukunakekela izixhobo kunye yesigqibo xa.
Zokusombulula-Ukucacisa izinto ngasemva iimpazamo ukuba zisebenza kwaye isigqibo ukuba mabenze ntoni ngalo.
izixhobo okanye kusetyenziswe ukulungisa-elungisa usebenzisa izixhobo ezinqwenelwa.
Quality-Control Evaluation-Ukwenza uhlolo kunye neemvavanyo izinto, izisombululo, okanye imisebenzi ukuze ukuvavanya umgangatho okanye ukusebenza.
View kunye nezibonelelo Decisionmaking-Ukuqwalasela kunye neendleko ezinokuthelekiswa zemisebenzi kunokwenzeka ukuba ukhethe eyona ilungelene.
utshintsho Uhlalutyo-Ukumisela inkqubo kufuneka asebenze njani nendlela ekubekeni, imisebenzi, kwakunye ingxaki nefuthe kwiziphumo.
Methods Analysis-Ukumisela iinkqubo okanye iimpawu yokusebenza kwenkqubo kunye ngokungqinelana enamabhongo kwenkqubo, efanelekileyo okanye izenzo ukuze kuqiniswe ukusebenza.
Timemanagement-Ukulawula mzuzu kwabanye kunye likabani ithuba lakhe.
Administration of Imali-Ukuchonga ingeniso yindlela amathuba kwenziwe ukuba kwenziwe umsebenzi, kunye neentengiso mayelana nala inkcitho.
Ulawulo Product Resources-Ukuthobela yaye iqokelela ukuya echanekileyo yokusebenzisa iimpawu, izixhobo, kunye nezinto ezifunekayo ukwenza ethile asebenza.
Ulawulo labasebenzi Resources-Ukudala, eliqhubela, kwaye phambili abantu ngenxa asebenza, ukubona abantu kakuhle umsebenzi wakho.
Bavumile ukuba Stage (okanye ezongezelelweyo idiploma 2-yr)
Courses School amaninzi
Engaphezulu kwe 1 yr, ixhomekeke ku 2 iminyaka yaye kubandakanya,
Umsebenzi Authority Qualification Skills
Achievement / Umsebenzi – %
Ngqo yaye bathathe inxaxheba kumalungiselelo, imifuno, nokulungiselela of muffins zeentlanzi, inyama, imifino, …